SIDA LOO KARIYO HADHUUDHKA POLARIS-BADAN: TALOOYIN KU SAABSAN CUNTO KARINTA IYO DOORANAYA COBS - KHUDRADDA
Iyada oo ay soo ifbaxday mashiinka qafiifka ah - qalab lagama maarmaan ah oo loogu talagalay hooyooyinka intooda badan - cuntooyin kala duwan oo loogu talagalay diyaarinta cuntooyinka la yaqaan iyo kuwa aan caadi ahayn waxay bilaabeen inay muuqdaan. Xitaa hadhuudhku hadda waa la kariyaa dheriga muusikada - waxay soo baxdaa jilicsan oo udgoon.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa sifooyinka wax lagu kariyo hadhuudhka mashiinka qafiifka ah isla markaana si faahfaahsan u qeexo habka wax loo kariyo oo dhan.
Qarsoodiga hadhuudhku wuxuu yahay in miro-geedka ay leedahay cufan cufan oo u adkeysanaya heerkulka sare. Dalaggu wuxuu hayaa badi qaybaha faa'iidada leh iyo fiitamiinada, xitaa kadib daaweynta kulaylka dheeraadka ah.
Halabuurka hodanka ah ee macdanta ayaa ka mid ah:
xaddi badan oo fiber ahoo leh saameyn faa'iido leh oo ku saabsan shaqada mareenka mindhicirka;
Fitamiin B - hagaajinta geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka, xoojinta nidaamyada neerfaha iyo wadnaha;
antioxidants - jirka ka ilaali saameynta dibedda ee waxyeellada leh, hagaajinta xaaladda maqaarka iyo timaha;
Macdanta (copper, fosfooraska, birta iyo zinc) - faa'iido leh murqaha iyo lafaha, waxay ku lug leeyihiin kobaca iyo samaynta dhiig;
carotenoids - lagama maarmaanka u ah aragti wanaagsan, gaar ahaan da 'weyn;
qaybaha phytochemical - farageliyaa kaydadka kolestaroolka.
Corn marka la isku daro waa mid isku dhafan oo dufan, karbohidraat iyo borotiinno, sidoo kalena waxay u dhaqmaan sida ilaha tamarta - maaddada kalooriga ah ee 100 g oo miro ah waa 123 kcal.
Talooyin ku saabsan doorashada dalagga
Si ay hadhuudh ugu noqoto mashiinka qafiifka ah si aad u soo jiiddo casiir leh oo si dhakhso ah u kariyo, waxaad u baahan tahay inaad doorato alaabta saxda ah.
Waa muhiim! Cuntada ugu khafiifsan iyo kareysa waxay noqon doontaa badar, kaas oo lagu iibiyo oo kaliya inta lagu jiro xilliga xiga - laga bilaabo bartamihii July ilaa bartamihii August.
Qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan doorashada ugu wanaagsan ee hadhuudhka:
Ka taxadar caleemaha. Waa inayan aad uga fogeyn jiilka, waa mid aad u jaale ah oo qalalan. Corn, ku rid miiska isaga oo aan caleemo, ma ahan qiimo u iibsan at dhan - waxaa laga yaabaa in lagu daaweeyo sunta cayayaanka.
Cufanka iyo cufnaanta. Pips waa inay ahaato huruud ama huruud. Hore ee hadhuudhka, madow iyo adag yahay.
Cayayaanka. Cayayaanka yaryar ayaa ku dhuuman kara caleemaha - waa inaad sidoo kale ka hubsataa.
Rootiga ugu fiican ee la kariyo waa mid yar iyo mid cusub, oo aan lahayn qoryo ama waxyeello ku saabsan da'da.
Sida loo diyaariyo hagaha?
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad go'aansato: adiga ama caleemo la'aan ayaad qorsheyneysaa inaad ku kariso cawska. Waxaad si buuxda uga saari kartaa caleenta ama ka tagi kartaa oo keliya ugu yar yar oo iska tuur oo qalaji. Haddii miraha khudradda laga helo jiilka, waa la jaraa, ka dibna koollada waxaa lagu dhaqaa biyo qabow.
Si aad u kariso kalluunka hadhuudhka si dhakhso ah oo aan qallal lahayn, waxaa lagu qooyay biyo qabow mudo 1 saac ah. Haddii hadhuudh badani la qabto, waxaa la samayn karaa juicier iyo hindise kale. Si arrintan loo sameeyo, cobska waxaa lagu qooyay isku dar ah biyo qabow iyo caano oo ah saamiga 1 illaa 1. Waa lagama maarmaan in la adkeeyo waqti dheer - ilaa 4 saacadood.
Sidee loo bilaabaa cunto karinta?
Ka dib markii cobsiyada loo diyaariyey cunto karinta, waxaad u baahan tahay inaad ku qiyaasto cabirkooda sida waafaqsan baaqiga nambarku. Qalabka Polaris waxaa lagu soo bandhigaa noocyo kala duwan oo kala duwan, laakiin qadka waxaa ku jira bowl laba laba jibbaar ah - 3 iyo 5 litir. Haddii koorsooyinka la doorto muddo dheer, ka dibna kuma dhici doonaan baaquli saddex-litir ah - waa lagama maarmaan in la gooyo hadhuudhka kala badh ama qaybo badan.
Waa inaad si taxadar leh u barataa tilmaamaha loogu talagalay Multicooker Polaris oo si adag u raac sharciyada isticmaalka qalabka si ay saxan tahay dhadhan fiican leh iyo cunto karinta ma keenayso dhibaato.
Digniin! Mishiinka isku dhafka ah waa inuu noqdaa mid qalalan - waa in aan loo oggolaan inuu galo qaybta kuleylka.
Marka laga reebo hadhuudhka, waxaad u baahan doontaa biyo - waxa fiican inaad isticmaasho daahiriyo ma aha biyaha tuubada caadiga ah - saxan ayaa soo jiidaya more delicious. Salt aan loo isticmaalin inta lagu jiro karinta - waxa kaliya oo ka dhigaa hadhuudh adag. Laakiin waxaad isku dayi kartaa inaad ku darto laba qaado oo sonkor ah oo biyo ah - kuwa guriga leh ee waayo-aragnimo leh waxay sheeganayaan in ay siinayso miro iyo jilicsanaanta.
Foornooyinka dhammaan dadka isku dhafan waxay leeyihiin dabool aan dahabi ahayn oo si sahlan u waxyeeleeyeen waxyaabo fiiqan ama adag. Sidaa darteed, inta lagu guda jiro karinta hadhuudhka, caleemaha hadhuudhka waa in la dhigaa hoose ee saxanka - waxay ilaalin doonaan Teflon xasaasiyad leh.
Polaris badan oo macaamiisha ah ayaa soo jiidatay dad badan oo isticmaala - tani waa miisaaniyadda miisaaniyadda tiknoolajiyada casriga ah oo leh fudaydh sahlan oo fudud iyo nashqad quruxsan. Qaababka Polaris ee kala duwan ayaa kala duwanaan kara iyada oo ku xiran bedelida cutubka, laakiin waxaa jira dhowr waxyaalood oo aasaasi ah:
Karinta. Heerkulka hore waa 124 darajo. Cuntada waxaa loo xakameyn karaa si madaxbannaan iyadoo furaysa daboolka iyo hubinta diyaargarowga alaabta. Dhaqdhaqaaqa badan ayaa iska boodi doona isla marka biyaha oo dhan ka soo baxaan taangiga.
Shuban. Xaaladdan, karinta waxaa lagu sameeyaa heerkul ah 90 darajo. Waqtiga ayaa kala duwanaan kara - laga bilaabo 1 saac ilaa 4 saacadood.
Biyaha. Waxay ku lug leedahay doorasho suxuun si loo caydhiyo: khudaarta, kalluunka, hilibka. Corn waa la diyaarin karaa iyada oo xulashada ikhtiyaarka "Khudaarta" - wakhtiga hore waa 20 daqiiqo.
Pic. Cabbiraadda heerkulka - 85 darajo oo aan awood u lahayn in la qabsado wakhtiga. Waqtiga wax lagu kariyo waa 25 daqiiqo.
Eeg cuntooyinka kale ee lagu kariyo suxuunta dhadhanka leh ee hadhuudhka ku jira mashiinka qafiifka ah ee maaddadan.
Marka xigta waxay noqon doontaa mid la isku qurxiyo oo lagu kariyo hadhuudhka mashiinka multi-cooker Polaris PMC 0512AD oo leh 5 litir. Cuntadan waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda.:
4 dhegood oo ah hadhuudh;
4 koob oo biyo ah;
1 qaado oo sonkor ah;
Diyaarso dhagaha loogu talagalay karinta: nadiifi caleemaha aan qalafsan, kormeer shay kasta, raaci biyo qabow.
Caleenta caleenta ee caleenta lakabka keliya ee ku yaal hoose ee luuqada badan, oo dhig meelo yaryar oo dhan, gebi ahaan ama googo gogo, dusha sare.
Ku shub biyo ku sii madee si uu u daboolo koollada gebi ahaanba. Adiga ayaa isbeddeli kara qiyaasta qadarka ah ee ku xiran heerka cabbirka. Laakiin heerka biyaha waa inuusan ka badneyn calaamadda ugu badan ee la ogolaan karo ee baaquli.
Ku dabool hadhuudhka leh caleemaha la dhaqay iyo xir daboolka. Qalabka ku duub qalabka korontada.
Xulo hab. Waxaad isticmaali kartaa hababka: "Karinta", "Rice", "Soup". Si aad u dooratid, badhanka badhanka "Menu" ilaa inta qofka la rabo uu u jeedo. Riix badhanka "Start".
Haddii habku u oggolaado, samee mudada waqtiga. Cunto yar-yar ayaa kari karta 20 daqiiqo, hadhuudhkuu bislaaday, waqtiga waa in la kordhiyaa 40-60 daqiiqo. Haddii hadhuudhku uu aad u kululaa oo laga badiyay, waxaa laga yaabaa inaad u kariso ilaa hal saac iyo badh.
Ka dib markaad calaamadeysid, kala fur furaha kala duwan ee korontada, fur daboolka si taxaddar leh uga saari cobska diyaar ah. Haddii aad ka shakisan tahay diyaargarowga hadhuudhka, waxaad ku dhejin kartaa khaanadda fargeeto ah iyo qiimeynta jilicsanaanta. Haddii ay lagama maarmaan noqoto - u bax si aad u gaarto 10-15 daqiiqo oo kale.
Caawimaad! Waxay u fiicantahay in la cuno hadhuudh la kariyey isla markiiba - tani waa sida dhadhanka ugu adag iyo jilicsanaanta.
Laguma talinayo in aad ka tagto cobs biyaha ku jira - miro waxay noqonayaan biyuhu oo aan dhadhamin. U adeegso saxanka la dhammeeyey subagga la dhalaalay - qasacadho ku jirta ama biyo ka soo kor. Waxaad cuni kartaa cusbo ama dusha sare ee laysku qurxiyo.
Corn, caadka, waxay soo baxday casiir leh iyo nafaqo leh. Si aad u diyaargarowdid kalkaaliyaha isku dhafan, waxaad u baahan tahay taangiyo gaar ah oo leh godad - shiil. In model qaabka Polaris PMC 0512AD waxaa lagu daray.
Digirta hadhuudhka - 3 xabbo;
biyo nadiif ah - 3 koob;
basbaaska madow ama xawaash - 1 tsp;
Hawlaha wax lagu karinta waxaa ka mid ah tallaabooyinka soo socda.:
Diyaarso cobs sida habka caadiga ah. Baahida leh oo aan lahayn caleemo.
Isku day inaad hadhuudh ku sameyso bogga - haddii hadhuuddu ay ka dheeraato shabaqa, waa in la googooyaa.
Ku dar qaso iyo cusbo ku jira weel yar.
Khariidad kasta oo duuban oo isku darka ah.
Ku shub biyo qashinka ee isku dhejiyaha, ka dhig mishiinka korantada.
In qajiyo si ay u jiifiso kaabash.
Daar qalabka ku jira shabakada oo dooro "Habka faaruqinta": riix badhanka "Menu" dhowr jeer ka hor inta aanad dhaqaajin habka. Xulo nooca alaabta - kiiskan, "Khudradda".
Waqtiga caadiga ah ee nidaamka waa 20 daqiiqo, waa arrin ku filan in la kariyo noocyada caanaha ee hadhuudhka. Inta soo hartay waa inay "ka boodaan" habka laba jeer. Riix badhanka bilawga iyo suga calaamadda.
Isku day inaad rabto foosto - waa inay si fudud u xoqdaa hadhuudhka.
Ka saar xaydha oo ku rinjee xaashi saxan.
Waxaad arki kartaa cuntooyinka fudud iyo kuwa asalka ah ee cuntada lagu kariyo hadhuudh aad u yar.
Mucaradka noocan oo kale ah ayaa horeyba diyaar u ah inuu cuno. Noocyada loo isticmaalo ayaa gacan ka geysanaya in lagu kobciyo dhadhanka dabiiciga ah ee sheyga, sidaas darteed saxan ayaa loo isticmaali karaa sidii cunto fudud oo asal ah. Haddii aad doorbidayso, waxaad u adeegi kartaa suugaanta aad jeceshahay ama ketchup leh hadhuudh. Mashiinka qunyar-socodka ah waa qalab farabadan oo kaa caawin doona inaad si fudud u diyaariso hadhuudh taas oo faa'iido leh oo jecel dad badan oo aan lahayn dadaal badan.
Hilib la karkariyey waa badeeco dhadhan fiican leh oo caafimaad leh, sidaa darteed cuntada sida saxda ah waa inay ahaataa midka wax lagu karsado. Boggayaga waxaad ka heli doontaa talooyin ku saabsan sida iyo inta uu le'eg yahay si aad u karisid cawska mashiinka cadaadiska, iyo sidoo kale Redmond iyo Panasonic multicookers.